‘ओलीजीले देशको इज्जत राखिदिनुभयो, मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा जोखिमै हुन्छ’: डा. सुन्दरमणि दिक्षित – eSidhakura
मुख्य पृष्ठविचार‘ओलीजीले देशको इज्जत राखिदिनुभयो, मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा जोखिमै हुन्छ’: डा. सुन्दरमणि दिक्षित
‘ओलीजीले देशको इज्जत राखिदिनुभयो, मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा जोखिमै हुन्छ’: डा. सुन्दरमणि दिक्षित
डा. सुन्दरमणि दिक्षित । प्रधानमन्त्रीले नेपालमै मृगौला प्रत्योरोपण गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । उहाँको प्रत्यारोपण राम्रोसँग सफल होस् मेरो शुभकामना छ । नाम चलेका, ठूला पदमा बसेका ठूलाबडाहरुले नेपालमै उपचार गर्दा नेपालका डाक्टर र नेपालीको पनि इज्जत बढ्छ । यसले डाक्टरप्रति जनताको भरोसा पनि बढ्छ ।अहिले ठूलाबडालाई केही भयो कि सिंगापुर, बेलायत, अमेरिका दौडिने जुन ट्रेन नै बसेको थियो । ओलीजीले आफ्नो मृगौला नेपालमै प्र्रत्यारोपण गर्ने निर्णय गरेर नेपालको पनि इज्जत राखिदिनुभयो ।
नेपाली डाक्टरमाथि नेपाली जनताको भरोसा दिलाइदिनुभयो । त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ ।मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा अलिकति पहिलो भन्दा दोस्रोपटक अवश्य पनि जोखिमै हुन्छ । किन भने खाली मृगौला मात्र ड्यामेज हुने होइन । त्यो किड्नीको खराबीले वर्षौदेखि शरीरका अन्य भागहरुमा धक्का परेको हुन्छ । जुन कुरा हाम्रा यन्त्रहरुले नसमात्न पनि सक्छन् । अहिले हामीसँग उपलब्ध यन्त्रले जति पत्ता लगाउन सक्छ त्यो त ठीकै छ । शरीरका हरेक अंगप्रत्यांगमा हरेक रोगले छोएको हुन्छ ।किड्नीका कारणले शरीरका अन्य भागमा परेका धक्कामा नयाँ किड्नीले कत्तिको धान्न सक्छ भन्ने ठूलो कुरा हो ।
किन भनेर शरीरले पनि किड्नीलाई धान्नुपर्छ र किड्नीले पनि शरीरलाई पत्याउनुपर्छ । एउटा बूढो मान्छेले तरुनी केटी विवाह गर्दा बूढाले तरुनीलाई कत्तिको धान्न सक्छ र तरुनीले पनि बूढालाई कत्तिको पत्याउन सक्छ भन्ने कुरा आउँछ । तरुनो स्वस्थ मान्छेको किड्नी बूढो र रोगी मान्छेलाई हालेको छ । त्यसलाई कसरी मेल खान्छ, तरुनी केटी बूढो मान्छेको विवाह भएको जस्तो हो । हामी शुभकामना दिऔं कि उहाँको राम्रो होस् ।उहाँको खाली किड्नीको मात्रै समस्या भनेर हुँदैन । अस्ति मात्रै हार्टको एन्जिओग्राफी गरेका छन् ।
जति वर्षहरु बित्छन् यन्त्रहरु सुपर सेन्सेटिभ हुन्छन् । आजभन्दा ५० वर्ष अगाडिका सिटिस्क्यान, एमआरआईका मेसिनले जति काम गरेको छन् । आज त्योभन्दा १०० गुणा बढी सेन्सेटिभ मेसिनहरु आइसकेका छन् । हामी डक्टरहरु पनि हरेक दिन नयाँ साइन्स र टेक्नोलजीमासँग अपडेट भइरहनुपर्छ । अब हामी आशा गरौं उहाँको शरीरले नयाँ किड्नी धान्न सकोस् । किड्नीले पनि उहाँको शरीर धान्न सकोस् ।किड्नी बिग्रिएकाले त प्रत्योरोपण गरिएको हो । उहाँलाई जसले किड्नी दिएको थियो, त्यो त सकियो । हुन त त्यसले १२ वर्ष काम गर्यो ।
तर, यो नयाँ किड्नीले त्यतिनै वर्ष काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । किन भने अब त अभैm रोगी शरीर छ, त्यसकारण हामीले सफल, राम्रो होस् धेरै चलोस् भनेर शुभकामना दिन सकिन्छ । तर, एकदमै राम्रो हुन्छ, यति वर्ष हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन ।देशको विकास समृद्धिमा ओलीजीको इच्छा छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन । उहाँलाई यो रोग लागेको पहिला नै थाहा छ । त्यसले म कुन बेला मर्छु भनेर उहाँले पनि सोच्नुपर्छ । जसरी उहाँ १४ वर्षसम्म जेल बसेर जसरी यो ठाउँमा आउनुभयो । आउने बित्तिकै जसरी विकास र समृद्धिको सपनाहरु बाँड्नुभयो ।
त्यो उहाँको भित्री इच्छा थियो । त्यसमा उहाँलाई शरीरले पनि साथ दिएन । अहिले पछिल्लो पटक परिस्थितिले पनि साथ दिएन । देखिएकै छ, पछिल्लो पटक उच्चस्तरमा त्यत्रो ग्रुपिजम भएर ओलीलाई एक्लो पारिएको छ । त्यसो गर्नुहुँदैन थियो । त्यसले त उहाँ कामै गर्न सक्नुहुन्न । एकातिर विमारीले च्यापेको छ, अर्कोतिर सबैले ग्रुपिजम गरेर ओलीलाई एक्लै पारेका छन् ।यहाँ ओलीका गल्तीहरु छन्, त्यसमा गोकुल बाँस्कोटाका कुरा छन्, भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला खेल छन् । तर, ओलीले काम गर्न त खोजेका हुन् । तर, खुट्टा तानातान गरेर कामै गर्न दिएनन् ।
यहाँ सबै भूतपूर्वकहरु एकातिर भएर बसेका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्रीपदको स्वाद चाखिसकेका मान्छे छन् । सबैलाई मै हुन्छु भन्ने ध्याउन्ना छ । त्यसकारण ओलीलाई सबैतिरबाट घेराबन्दी गरेका छन्, त्यसो गर्नुहुँदैनथियो । ओलीको कहाँनेर गल्ती भयो भने उनले भ्रष्टाचारलाई पटक्कै रोक्न सकेनन् । उहाँका ज्यादै नजिक भएका मान्छे अति भ्रष्ट हुँदा उहाँलाई पनि छोयो । त्यो चाहीं उहाँको महागल्ती भएकै हो ।अहिले ओलीजी र प्रचण्डबीच सम्बन्ध चिसिएको कुरा त सबैलाई थाहा छ । मैले पहिलादेखि भनिरहेको छु, ‘यी दुईवटा त एक हुनै सक्दैनन्’ ।
मलाई उसको पनि उसप्रतिको विचार, उसको पनि उसप्रति विचार मलाई राम्रो थाहा छ । मैले त दुवैतिर धेरै लामो समय काम गरेको छु । त्यसकारण यिनीहरु एकढिक्का हुनै सक्दैनन् । अहिले त झन् उच्च नेताहरु कहिले उता लागेका छन् कहिले यता लागेका छन् । हुँदाहुँदा अहिले आएर माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव सबै उतै लागेर प्रचण्डको पल्ला भारी भएको छ । अहिले वामदेवलाई ल्याउनुपर्ने कुनै जरुरी नै थिएन ।
पिउने पानी नै छैन, हात चाहिँ केले धुने ?
इमर्जेन्सी कक्षमा को’रोना संक्रमितको उपचार गर्दागर्दा था’केका डाक्टरको यस्तो चे’तावनी